Maalinta Haweenka Adduunka oo laga xusay Boorame | Somaliland.Org
Maalinta Haweenka Adduunka oo laga xusay Boorame
March 8, 2013	Boorama, (Somaliland.Org)- Munaasibad lagu xusayay maalinta haweenka adduunka oo ku began 8 March ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
Munaasibaddan oo ka duwanayd kuwii sannadihii hore waxay dhar, caw’o iyo furaashyo la guddoonsiiyay haweenka dhinaca dhimirka wax ka qaba ee ku nool magaalada Boorama.
Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay haweenka gobolka Awdal qaybo badan oo ka mid ah, xoghayaha Dawladda Hoose iyo Badhasaabka Gobolka Awdal.
Waxa ugu horayn ka hadlay munaasibadaas Xoghaya NOW ee Gobolka Awdal Radwa Maxamed Cige waxayna hambalyaysay gabi ahaanba haweenka Somaliland, iyadoo sheegtay in munaasabadani ay ka duwan tahay kuwii hore ,waxaanay tidhi. “ Sanadkan waxaanu qorshaysanay inaanu la qaybsano duruufta haysata haweenka reer Boorama ee dhinaca dhimirka wax ka qaba waxaananu sanadkan gudoonsiinay Dhar iyo wax lagu seexdo oo aanu is leenahay waxa ay u taraysaa wax wayn, waxaan ugu baaqayaa haweenka gabi ahaanba Somaliland iyo Boorama in meelkasta oo ay joogaan ay garab siiyaan haweenka dhimirka wax ka qaba, waxaanan mar kale si wayn u bogaadinayaa haweenkii ka soo shaqeeyay munaasabadan.”
Xoghayaha Degmada Boorama iyo Badhasaabka gobolka Awdal oo iyaguna ka hadlay halkaas ayaa waxay bogaadiyeen haweenka waxaanay sheegeen inay haweenku yihiin laf-dhabar muhiim ah oo bulshadu ay ku tiirsan tahay.
Sidoo kale madashaas ayaa waxa ka hadashay Madaxa Waxbarashada ee NOW Marwo Fadxiya Yuusuf waxaanay sheegtay in NOW ay leeyihiin dugsi u gaar ah oo wax lagu barto, waxaana ka mid ahaa hadaladeedii. “Waxaanu hablaha barnaa farshaxanka, dhar-tolista iyo cunto karinta, dugsigu waa mid aad u balaadhan waxaananu ka dalbanaynaa dhamaan haweenka inay keenaan halkan hablahooda si ay uga faaiidaystaan waxbarashadan, waxaanan gabi ahaanba bogaadinayaa haweenka gobolka Awdal iyo Somaliland.”
Qaar ka mid ah haweenkii iyaguna ka hadlay madashaas ayaa bogaadiyay haweenka adduunka iyo Somaliland iyo gaar ahaan haweenka Awdal, waxaanay sheegeen inay haweenku yihiin laf-dhabar bulshada lagama maarmaan u ah.
Previous PostBadhasaabka Awdal Oo Hadlay Dhacdadii XariiradNext PostUrur Cusub Oo la yidhaaho GABAX Foundition oo lagaga dhawaaqay Hargeysa	Blog